Khadadka Wadada Yavuz Sultan Selim | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulYavuz Sultan Selim Bridge Map
Yavuz Sultan Selim Bridge Map
22 / 08 / 2012 34 Istanbul, GUUD, Khariidadaha, hyperlinks, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
Yavuz Sultan Selim Koprusu Guzergahi Khariidadda
Buundada Wadada Bridge ee Bridge Yavuz Sultan Selim: Buundada saddexaad ee laga dhisi doono Istanbul iyo wadooyinka isku xiri doona iyo wadooyinka isku xiri doona ayaa la go'aamiyay. Lambarka faylka 1-440 “Qorshaha Wadada Waqooyiga Marmara ee North Waqooyiga Marmara pol waxaa lagu oggolaaday Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul xaddiga qorshaha 1 / 25.000 bishii Agoosto ee sanadkii hore. Qorshaha, oo la hakiyey horraantii Sebtember, ayaa la joojiyey horraantii Oktoobar. Si kastaba ha noqotee, meelaha ka baxa wadooyinka waaweyn iyo wadooyinka isku xira, kuwaas oo muhiimad weyn u leh marka loo eego qiimaha dhulka ee gobollada ay ku yaalliin, ayaa ka baxsaday feejignaan. Xaqiiqdii, dadweynuhu waxbadan kama ogain arrinta. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegayaa in maalgashadayaasha guryaha, gaar ahaan dillaaliyeyaasha dhulka, ay durba billaabeen dadaallo gobolladaas.
Sida laga soo xigtay qorshaha la ansixiyay, jidka sadexaad ee waddada wuxuu ka bilowdaa Gebze Şekerpınar Balcık. Wadada maraysa meel u dhow Akfırat Tepeören iyo Kurnakoy ayaa ka socda horumarka goobaha kaymaha ee Sultanbeyli. Waxay u gudubtaa Alemdağ Forest ka dib markii ay dhex maraysay aagagga Shamanda iyo Alemdağ. Beykoz wuxuu ku xiran yahay Ishakli, Paşamandıra, Riva iyo Poyrazköy.
Ka dib markii waddada isku xirta inay xulka ka socda Yurub ee Bridge Bosphoru la pass saddexaad iyada oo Demircikoy Garipçiler la Uskumrukoy Ariköy soo galo ka dambeeya Forest Belgrade ah. Ka dib markii tuulooyinka Odayeri iyo agagaaraha la dhameeyay, aaggu wuxuu ka kooban yahay Tayakadin iyo Baklaaley ilaa Hadimköy. Markaas, ee waqooyiga Lake Büyükçekmece, by dhaqaaqin beeraha ee garoonka saddexaad Catalca İnceğiz Gazitepe iyada oo lagu qaban doono jid Silivri buls- dhex outlet ah tangential dhamaado Kınalı.
Qiimaha jidka cusub ee jidka weyn
Qiimaha Deegaanka Deegaanka (m2)
Poyrazkoy 80 - 120
PASMA 120 - 150
70-100 leh Lake
Nishantepe 500 - 600
Paşakoy 500 - 600
Kurnakoy 50 - 100
Waddada Woqooyiga Marmara, oo lagu qorsheynayo in ay baaba'do socodka gaadiidka, ayaa si toos ah u qiimeyn doonta meelaha qaar ka mid ah labada dhinac ee Istanbul. Sida laga soo xigtay khabiiro, gaar ahaan meel u dhow meelaha laga soo galo wadada cusub ee cusub ayaa bixin doonta qiimo. Ka dib marka laga soo galo iyo ka baxo Gebze Şekerpınar, Tepeören Akfırat waa meesha ugu horaysa ee laga bilaabi karo jidka cusub. Goobta labaad ee Akfirat waa wadada Istuudka ah ee Istanbul halkaas oo ah tartan F1 ah.
Goobta saddexaad ee wadada weyn ee waddada cusub ayaa la qorsheeyay meel u dhow xaafada Mevlana ee Sultanbeyli. Goobta ugu dambaysa ee laga soo galo dhinaca Anatolianka waxaa la dhisay Alemdağ iyo Çekmeköy oo ku yaal Shilaal gawaarida.
Waddada Marmara Waddada ayaa sidoo kale waxay ka baxdaa Catalca. Goobta ugu dambaysa ee ka soo baxda jidka ayaa aad ugu dhow madaarka saddexaad ee lagu dhisi doono Silivri Gazitepe. Waddada cusub ee wadada TEM la gasho TEM.
DIB U QAADAN YAHAY
Labo waddo oo isku xiran ayaa loo qorsheeyay dhinaca Anatoliyaanka ee u dhaxeeya Waddada Marmara iyo TEM. Marka ugu horeysa ee wadada xiriirka tooska ah ayaa dhici doonta isla markiiba Sultanbeyli ka dib markaad ka gudubto Kurtköy. Wadada labaad ee xiriirka tooska ah waxay ka bilaabataa xabsiga Ummraniye waxayna ka gudubtaa Alemdağ, Taşdelen iyo Çekmeköy waxaana lagu xirayaa TEM oo ka socda Chavuşbaşı.
Dhinaca Yurub, waxaa jira laba waddo oo marin haboon. Ka dib markii uu gudbiyo buundada saddexaad, waxaa jiri doona qaab cad oo xidhiidh ah oo u dhaxeeya Karaağaç iyo xafiisyada TEM Mahmutbey. Meel faleebo leh oo u dhaxeysa Waddada Marmara iyo TEM ayaa laga dhisi doonaa meel u dhow magaalada Göteborg.
Jid cusub oo calaamado cusub ah ayaa loo qorsheeyay inta u dhexeysa Kagame iyo Nakkaş. Search bilaabmaa hore ee wadada ISKI General Directorate Kagithane, isku xidha xaafada Gazi iyo ka dib Sazlıçeş Dam iyo Lake Kucukcekmece, iyada oo Başakşehir Hadimkoy dambe ee North xumeeyayna Nashqadeeyaha Büyükçekmece Lake ka wayn oo ka dambeeya. Wadadan isku xirka ah ee Habibler iyo Sultansifligi, Kunçekmece, Bahçeşehir, Hadımkoye ayaa la soo saaray. Kadibna waxaa lala xiriiriyay TEM oo u dhow Garoonka diyaaradaha ee Hazerfen.
ROADS AND RINGS
Length of Kinalı - Balcık weyn oo wado jidka North Marmara waa KNUMX kilomitir. Khadka dhinaca Asia ee Istanbul 141. Dhererka xariiqda dhinaca Yurub waa mileada 54. Dhererka buundada saddexaad ee baddan wuxuu noqon doonaa kun mitir 86. Masaafada u dhexeysa Nakkaş iyo Kağıthane waa 377.
Dhererka wadada xiriirka ah ee u dhexeeya Çekmekoy iyo Xabsiga Ummraniye waa 13.6. turnoff Cekmekoy kun 2 423, 735 Kurtkoy turnoff, Formula turnoff kun 744, 704 kun iyo Balchik turnoff haddii Sancaktepe 500 kun oo mitir oo dherer ah. Dhererka wadada cusub ee Madaarka Atatürk iyo Booqashada Basakşehir ayaa ka soo wareegtay 15. 2 151 kun turnoff Silivri, turnoff Catalca 6 76 kun, turnoff Elm 8 184 kun, turnoff Bahçeşehir 5 200 kun iyo turnoff Ikitelli noqon doonaa 6 152 kun oo mitir oo dherer ah.
GURYAHA GURYAHA YURUB
Khubarada marxaladda koowaad ee Waddada Marmara ee Waddada waa in lagu maalgeliyaa meelaha laga baxo. Ka bixitaanka tuulada Gazitepe, oo lagu dhawaaqay in uu yahay maddaarka ugu horreeya ee Silivri ka dib markii xuddunka Kinali ee ku yaala Yurub, ayaa si deg deg ah ugu dari doona gobolka. Dhulalka Alipaşa, Fenerköy, Ortaköy iyo Kadikoy ayaa lagu martiqaadi doonaa.
Gaadiidka labaad ee wadada weyn ee cusub wuxuu isku xiraa bartamaha Catalca. Ma jirto ruqsadda zakada sababtoo ah tuulooyinka waxay ku jiraan basin. Si kastaba ha noqotee, waa lama huraan in dhulku dhow yahay xarunta dhexe ee Catalunya ay bixin doonto qiimo. Sida laga soo xigtay kaqeybgalayaasha Catalca, Hadimköy iyo meelaha ku hareeraysan waxay siin doonaan kuwa maalgashan. Dhanka ugu dhow ee ka baxa Istanbul, Eyüp iyo ka bixida daaqadaha ka dhexeeya Gacismanmanpaşa, Eyüp, oo bixin doona qaddarinta dalalaka Agacli, Odayeri, Ciftealan iyo Kısırkaya. Dhulka dhulalka u dhow ee Demircikoy iyo Zekeriyaköy, oo kudhow gobolkaan, ayaa sidoo kale samayn doona qiimo. Northern Marmara Motorway, Gaziosmanpaşa iyo deegaanku waxay hubin doonaan horumarka.
Meelaha Elmadağ iyo Chavuşbaşı, oo lagu dhisi doono inta u dhaxaysa Waddada Marmara iyo TEM ee dhinaca Anatoliyaanka, ayaa siin doona qiimeyn dheeraad ah oo ku saabsan dhulalka ku yaala Çekmeköy iyo Taşdelen. Shirkadaha Shamanda iyo Sultanbeyli waxay qiime u yeelan doonaan dhulalka Sancaktepe iyo Kurnakoy. Dhoofinta Park Park, halkaas oo tartamada F1 lagu qabanaayo Aasiya, ayaa sidoo kale qiimayn doonta dhulka Akfirat iyo Tepeören. Marka laga eego barta laga bilaabi karo waddada ku taal magaalada Sugerpınar, qiimaha dalagyada warshadaha waxay u muuqdaan inay kordhayaan.
XADGUDUB HALKAN HALKEEDA SIILVRI
In tuulooyinka Silivri, mitirka laba jibbaaran ee dhulka tuulooyinka waa 10 leh 60, iyo dhulalka 75 iyo 250. Waxaan ogaanay in 40 malaayiin lacageed laga codsanayo dhul wareega 1.6 ee Galkacepta. 150 waxay u qalantaa 9 malaayiin lacageed oo loogu talagalay dhul wareeg ah. 3 wareegyo dhul ah oo ku yaal Fenerkoy, dhulkii hore ee waddada, 100 kun oo liras. 14.5 kun kiilo oo dhul ah oo ku yaal wareegyada 450 waxay la mid yihiin wadada Fener. Alipaşa, wareegyada 2.8 ee dhulka leh khadka calaamka Kinalı ayaa lagu iibiyaa 175 kun garaam. Milkiilaha wareega 2 ee dhulka Alipaşa iyo hareeraha wareegyada 125 ee waddada jidka weyn waxay dooneysaa inay iibsato hal kun rodol
Qiimaha dhulka iyo dhulka Silivri TL
Goobaha Beeraha (M2) Goobta (M2)
Alipasa 35-60 150-250
Fenerkoy 18-60 80-180
Kadikoy 10-60 90-180
BARNAAMIJKA BIYAHA CATALCA
Maaddaama qayb weyn oo ka mid ah Catalca ay ku jirto basin, dhulalka iibka ah guud ahaan waa goob. Marka laga reebo xarumaha Catalca iyo xarumaha tuulooyinka, ma jirto ruqsadda horumarinta. Chatalja mitir murabac oo dhul beeraha sifo tuulada ku kala duwan yihiin oo u dhexeeya pounds 20 120. guusha Bahşayiş beer jeeda 25 750 kun oo mitir oo laba jibbaaran ee tareenka hore iibiya 675 kun oo pounds. In ka 15 kun oo mitir murabac oo laami hore Yeşilbayır ifrazlı qiimaha a beerta 1.5 million pounds. Nashqadeeyaha In berrinka acre 3 120 ka heli kartaa a kun oo pounds, isagoo 11 400 kun oo mitir murabac oo dhul tuulada doonayo İzzettin 300 kun oo pounds, beer acre tnceğiz in 5 170 kun oo pounds ka soo harta iibka. Halka Elba, waxaad ka iibsan kartaa wareegyada 12.5 ee kunka kun ee xNUMX.
Waqooyiga Marmara Gawaarida, oo ka gudbi doona tuulooyinka Eyup iyo Gossiosmanpaşa, oo u dhow badda Badda; Yassıören, Baklali, Dursunkoy iyo Tayakadin ayaa qiimayn doona dhulka tuulooyinka. Tuulooyinkaas, mitirka laba jibaaran ee dhulalka tuulooyinka waxay ku kala duwan yihiin 15 iyo 100. Dumarka Taya, waxaa suurtagal ah in la helo mashiinka 2 kun mitir xaddiga 750 iyo aag ka mid ah 170 kun mitir oo laba jibbaaran iyo 17 kun kiilo. 600 kun 14 ee Baklaaliya waa qiimaha wareegga mitir laba jibbaaran 625 kun oo germood. Milkiilaha 500 kun mitir xaddiga 17 ee Dursunkoy wuxuu doonayaa kun xabbo kun. Waxaa la sheegaa in qiimahaas la dhisi doono marka wadada ay dhaafto.
North xumeeyayna jid wayn oo dhex maro meelaha la deggan yahay oo ku yaalla dhinaca Anatolian ku saabsan line kiiloomitir 54 hadda waa adag tahay in dalka oo raqiis ah ka heli. Tusaale ahaan, milkiilaha 5 kun 720 ee Poyrazkoy wuxuu doonayaa kun oo gogo oo miis ah oo ah mitir laba jibbaaran. Alibahadır In 450 11 beer kun-acre ah, iyo 935 5 kun oo mitir murabac oo dhul ku Paşamandıra waxay ka sii iibin 500 kun oo pounds. 600 acres land ee Göllü 15 million pounds.
Bozhane qiimaha loo aaneeyey inay u 7 840 kun oo acres beer, Ishakli in 4 690 kun oo mitir murabac oo dhul si ay qiimaha waa 225 kun oo pounds. 3 oo kun oo mile ah oo ku yaala 750 kun mitir laba jibbaaran oo ku yaal tuulada Cumhuriyet oo u dhow Beykoz. Qiyaastii kun kun oo hektar ah oo ku yaalla Xuseenli 270 waxay rabtaa kun kiiloo mitir. Sırapınar In kun 6 450 ku hektar oo dhul ah, haddii iibiyey 3.5 beer 300-acre in Nişantepe million pounds. 4 wareegyo dhul ah oo ku yaal Kurnakoy 2 kun kiilomitir. Waxaad ka iibsan kartaa moobiil ah XøUMX acres ee Balcık at 3 kun garaam.
224 135 for goob kun square meter ah Pasakoy, in Sancaktepe 200 mitir murabac oo dhul gudaha haddii aad u baahan tahay in meesha laga saaro u eegis lagu sameeyo 180 kun oo pounds. In Akfırat, waxaa suurtogal ah in lagu iibsado mitirrada xaddiga 210 ee 49 kun kiro.
Yavuz Sultan Selim Bridge 3. buundada
Yavuz Sultan Selim Bridge oo leh tirooyin
Buundada Yavuz Sultan Selim ee ku taal Masaajidka Wadada Waqooyiga Marmara ee…
Yavuz Sultan Selim Bridge ayaa kor u kacday
3. Xisaabinta ee Boorphorus Bridge Yavuz Sultan Selim
Ardayda DPU-da waxaa lagu baarey dhismaha "Yavuz Sultan Selim Bridge"
Yavuz Sultan Selim Bridge oo la dhammeeyay (Video)
Yavuz Sultan Selim Bridge oo ka yimid Beijing ilaa London
Dabaylaha oo ku xiran Yavuz Sultan Selim Bridge
Yavuz Sultan Selim Kuleyliyadeed ayaa qaatay qaabkoodii ugu danbeeyay
Xaaladii ugu dambaysay ee Javuz Sultan Selim Bridge
Ahmet Arslan: Yavuz Sultan Selim Bridge OGS, wuxuu noqon doonaa HGS
Yavuz Sultan Selim wuxuu noqon doonaa biriijka dhoofinta
Yavuz Sultan Selim Bridge ayaa Jimcihii furmaya
3. waddada buundada
Bridge Bridge Bosaforus Third
Istanbul 3. buundada
3 cusub. buundada istanbul
Meeqo lacag ayaa lagu kharash gareeyey maraakiibta Izmir iyo Istanbul?
15 Khariidadda Mareeyaha Khariidadaha Khariidadda
badbaado ayuu yiri:
Oo waxay ku yidhaahdeen in la qaado oo ku saleysan March xnumx.köpr, run ahaantii waa in la qaataa lacag la wareegidda March? .. waa lagu siin doonaa in ka dib markii asal ahaan tuuraa, ama i siiyey groundbreaking ah? .. miyaanan horumarka mustaqbalka ee ku Poyrazkoy iyo tuulada dhuunta? .. si kooban 3. Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan sugitaanka buundada .. Waxaan la kulmay hab cusub oo aad u fiican oo waxtar leh .. Thanks to habeenkii hore .. 3. Waxaan sugayaa wararka cusub ee ku saabsan buundada.
Caleemo sobatay ayuu yiri:
Tan ma lagu sharaxay Kamerapoll.com?